N'ogbe reusable na inogide PE nduku eto akpa 10 Gallon tent na Greenhouse | Winsom
Reusable na inogide PE nduku eto akpa 10 Gallon
3000-4999 Ibe 5000-9999 Ibe > = 10000 iberibe
$ 1.4 $ 1.3 $ 1,2
Akpa ndị a na-eto eto mara mma kwesịrị ekwesị maka ịkọ ụlọ na n'èzí ma dị mma maka mbara ala, obere ogige, mbara ihu, ụlọ anwụ na oghere ọ bụla. Enwere ike iji ha toro poteto, taro, radishes, karọt, eyịm, kukumba, mkpụrụ osisi, ose, zukini na ọtụtụ akwụkwọ nri ndị ọzọ.
1) Ihe eji eme ihe eji eme ihe.
2) Velcro windo nlegharị anya.
3) Nnukwu ikuku ikuku na mmiri mmiri.
Nọmba Model WS-GB1
Aha ihe Reusable na inogide PE nduku eto akpa 10 Gallon
Ogo Ahịa Dia.35xH45cm
Ihe eji akwa 160gsm PE
Ibu ibu 0,13 n'arọ
MOQ 3000 iberibe
Akpa ndị a na-enye nsogbu n’ubi na-adị mma maka ịkụ n’ime ụlọ na n’èzí. Ha dị mma maka patios, mbara ihu, obere ubi, ime ụlọ anyanwụ, na oghere ọ bụla. Ha zuru oke maka ịkụ mkpụrụ nduku, mkpọ, radish, karọt, eyịm, ahụekere na ọtụtụ akwụkwọ nri ndị ọzọ. You nwere ike iji obere akpa ndị a na-eto eto maka oge niile. Ma ịghara iwebiga ụlọ ókè.
Nke a akpa osisi emeela windo velcro. Site na windo, ị nwere ike inyocha ma osisi gị etolitela na ite ọka. I nwekwara ike isi na windo wepụta osisi gị.
Nnukwu ikuku ikuku na mbupụ mmiri: Oghere ndị ahụ na-adị ikuku na ala na akụkụ nwere ike inye ikuku mgbasa na ngbanye mmiri, na-egbochi mkpọrọgwụ ma mee ka ikuku na-akụ osisi ahụ, na-akwalite uto na ihe ọkụkụ.
Erial Ihe Nkịtị siri ike】: A na-eji akpa ihe anaghị eto, ihe dị mfe na nke siri ike, na -eme ka ọ kubie ume ma na-eto eto. Ọzọkwa nwere ike igbochi ịgbara mmiri ma nwee ike ị canụbiga mmiri ókè. Na-eme ka gburugburu ebe obibi dị mma maka ahịhịa
Wepu ahihia niile, ala, ahịhịa, were mmiri nhicha ma kpochaa ya ka o kporo okpukpo ma dochie ya maka ndozi iji weghachite oge ozo.
Nke gara aga: N'ụbọchị agbamakwụkwọ dịpụrụ adịpụ Marquee 20x40ft
Osote: [Detuo] [Detuo] Reusable bag na akpa nri Pee nduku
[Detuo] [Detuo] Reusable na inweghi PE nduku gr ...